Mikaroha ny tranonkala avy amin'ny efijery hidin-trano miaraka amin'ny Screen Lock Next | Androidsis
Microsoft dia manana nanao dia tsara miaraka amin'ireo fampiharana izay natombony tany amin'ny Google Play Store mba hametrahana azy ho iray amin'ireo loharanom-pahalalana tsara indrindra amin'ny rindrambaiko avo lenta. Izany koa dia nanampy tamin'ny alàlan'ny fifanarahana isan-karazany nifanaovan'ny mpanamboatra isan-karazany mba hamoahana mialoha ny fangatahan'izy ireo amin'ny fitaovany isan-karazany, toy ny tranga mahazo an'i Samsung ihany.
Misy fampiharana marobe izay ananan'i Microsoft izay avo lenta (miaraka amin'ity dia azonao atao ny misintona izay tianao rehetra), ary eo amin'izy rehetra dia misongadina iray antsoina hoe Next Lock Screen. Ity dia natao hanoloana ny hidy efijery an'ny findainao finday ary izao dia, tamin'ny kinova vaovao, nohavaozina tamina endrika tena miavaka: ny fahaizana manao karoka amin'ny Internet tsy mila manokatra ny fitaovana.
Ka anio ianao dia hahita fanavaozana vaovao ho an'ny Screen Lock Next for Android. Io kinova vaovao io dia mamela anao manaova fikarohana amin'ny Internet haingana tsy mila mamoha tanteraka ny telefaoninao. Amin'izao fotoana izao dia i Bing irery no motera fikarohana ahafahana mampiasa an'io endri-javatra io.
Ao amin'ny efijery hidin-trano, tsy maintsy tsindrio ny sary famantarana Bing eo ankavia ambony. Raha vao voatsindry, ny bara fitadiavana bing, ankoatran'ny inona ny pejy fandraisana isan'andro. Ampidiro ny teny fikarohana dia hahazo ny valiny mifanaraka amin'izany ianao. Ny fanavahana lehibe an'ity endri-javatra ity dia ny hoe tsy mila manokatra tanteraka ilay fitaovana ianao amin'ny fotoana rehetra.
Ny fanavaozana tokony mikasika ny Google Play izany Mitahiry mba hahafahanao misintona azy izao. Raha tsy izany dia resaka fiandrasana na fidirana amin'ny APK. APK izay tsy azoko nolalovana tao amin'ny apkmirror.com izay manana ny kinova 3.7.1 teo aloha ary mbola tsy manana an'ity iray izay hahafahanao manao fikarohana haingana na dia amin'ny motera Bing ihany aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny rindrambaiko Lock Screen Next an'ny Microsoft dia mamela ny fikarohana amin'ny Internet nefa tsy manokatra ny telefaona
Nofoanan'i Google ny Project Ara